Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » Corcoran: “17; Sano Bare ayaan ahaa,wax ma aqrin karin,mana qori karin”Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
John Corcoran ; waxaa uu ku koray Gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka, intii u dhaxeysay 1940 ilaa 1950kii waxaa uu ka mid ahaa, lix carruur ah oo ilmo adeer ahaa,waxaa uu ka qalin jebiyay Dugsi sare,waxaana uu ku biiray Jaamacad.
1960kii waxaa uu noqday Bare,waxaana uu waday muddo 17 Sano ah, hayeeshee waxba ma aqrin karin,waxna ma qori karin,waxaa uu ka sheekeeyay in Waaliddiintiis ay u sheegeen markii uu yaa in uu isagu yahay qofka guuleysanaya.
Ilaa da’da lix jirkiisa ayuu aaminsanaa hadalka waalidkii ee ah in isagu uu yahay qofka ugu dambeyn guuleysanaya,waxaan uu arrintaas qalbiga ku hayay waqti ka mid ah noloshiisa.
“Mar dambe ayaan go’aansaday in aan barto sida loo qoro loona aqriyo sida Gabdhaha ila dhashay oo kale,waxaan waqti badan ku bixiyay aamusnaanta,ku hagaajinta sadarka ee qoraalka iyo waqtiga Musqusha”.
“Markii la gaaray fasalka 2aad,waxaan isku daynay barashada aqrinta,laakiin aniga waxaa ay iiga dhigneyd,aniga oo furaya wargeys Shiineys ah oo kale oo dayaya kaliya, mana fahmeyn waxa ay ku saabsan yihiin sadarrada meesha ka muuqda, xitaa aniga oo jira 6,7 ilaa 8 Sano”.
“Waxaan xusuustaa aniga oo Habeenkii Alle baryaya,kuna duceysanaya Ilaalow berri isoo kici aniga oo garanaya sida loo aqriyo,mararka qaarna hurdada intaan ka tooso ayaan Nal ku shidayay Buugga si aan u eego haddii mucjiso ii timid,laakiin isbeddel ma leh”.
“Iskuulkii waxaan uga baxay markii aan dhowr jeer feer kala daalay ardeyda qaar,kuwaas oo isku dayay aqrinta iyo dhigaalka hayeeshee aniga iima suuroobin”.
“Baraheygii ayaa waaliddiintey u sheegay in aan wanaagsanahay,waxaana ay ii gudbiyeen fasalka saddexaad,sidoo kale 4aad iyo 5aad ayaa sidaas la iigu gudbiyay hayeeshee wali waxba ma aqrin karo”.
“markii aan isku dhex arkay fasalka 5aad inaga oo eber ah,subax kasta waan soo lebbistaa,Dugsiga ayaan soo aadaa,waxa kaliya ee aan sameeyana waa dagaal,ugu dambeyntiina dugsigii waa la iga eryay”.
“Markii aan gaaray fasalka 8aad,waxaan maalin kasta fadhiyay xafiiska maamulaha aniga oo dagaal uun ka soo baxay,doodna taagan tahay,waxaan go’aansaday in markan aan aniga ismaamulo”
“Waxaan doortay in aan noqdo Orodyahan,waxaan lahaa xirfadda Orodka,sidoo kalena waxaan lahaa xirfadda xisaabta oo Iskuulka ka hor,waxaan awooday in aan tiro badan isku daro horayna ka sheego”.
“Inta badan waxaan ku ordi jiray hareera Iskuulka,Leyligeyga inta badan walaalahey ayaa iiga soo shaqeyn jiray,marka ay kuwa dhibcaha badan keensaday khudbeynayaan,aniga waan fiirsan jiray uun”.
“Iskuulkii waxaan uga baxay Qish iyo qiyaano oo aan ku dhameeyay,waxaana markii dambe helay deeq waxbarasho oo Ciyaaraha fudud ah (Oraddada),waxaana halkaas ka soo baxay in aan ahay qof ka duwan kii hore”.
“Imtixaankii Jaamacadda,Barihii ayaa afar weydiin saaray sabuuradda,waxaan la soo baxay buuggeyga Buluugga ah,laakiin ma aqaan waxa sabuuradda ku qoran,waxaana u dhiibay wiilka ugu waangsan fasalka oo gadaal ila fadhiyay,waxaase uu igu yiri Gabadha Marry u dhiib,isaga waa uu xishoonayay,wiilkii ayaan ku celiyay,intii uu iiga soo jawaabayay waxaan la soo baxay buuggeyga 2aad ee Buluugga ah si aan isaga dhigo Nin su’aalaha ka jawaabaya”.
“Waxaan dhameeyay Jaamacaddii,Barayaasheydii iyo Waalidiintey waxaa ay igu dhaheen, saaxiibadaa nolol fiican ayey heystaan,shaqooyin ayey heleen,waxaan arkay jago shaqo Macallinimo ah,waana codsaday”.
Iskuulku waxaa uu lahaa kulan todobaadle ah,macallimiinta waxaa la weydiinayay su’aalo iyo waxyaabaha ay soo diyaariyaan,cabsida ugu badan waxaan ka qabi jiray in Maamulaha i dhoho,soo bandhig waxa aad soo qortay,illeyn maba aqaane”.
“Haddii ay sidaas dhici lahayd oo uu maamulaha i wici lahaa,waxaan ka istaagi lahaa kursiga,labo tallaabo ayaan qaadi lahaa,daaqadda ayaan iska tuuri lahaa,waxaan aay wici lahaayeen malaheyga Nambarka 911, ee Booliska si Isital la igeeyo”.
“Waan guursaday,waxaana markan isu heystaa nin isku filan,habeen habeennada ka mid ah ayaan xaaskeyga ku iri anigoo muraayad hortaagan, Cathy waxba ma aqrin karo,Cothy waan aqrin karaa,iyaduna ima fahim waxa aan ula jeedo”.
“Ma ogtahay Jacaylku Indho ma leh,waana dhagool,sanad kaddib cunug baa noo dhashay,muddo kaddib waxaan wax u aqrineynay gabadheenna,aniga aqris ma aqaan hayeeshee waan jilayay,waxaana u sheegayay sheeko sheeko iyo wixii la mid ah”.
“Gabadheydha ayaa igu tiri aabbo ma aqrineysid,sida hooyo oo kalena uma aqrin taqaanid,waa halka ay xaaskeyga ka ogaatay in aan waxna aqrin waxna qorin,waana ay i caawin jirtay”.
“Maalin Jimco ah ayaan aaday Maktabadda,waxaana weydiiyay qofkii agaasinka ka ahaa,waxaa ay ahayd haweeney,waxaa ay noqotay qofka 2aad ee ogaaday in aan waxba aqrin,qoriina,sababta oo ah waan u sheegay”.
“Waxa ugu horreeyay ee ay igu tiri waxaa ay ahayd aas aaska wax qorista isku day,aniga maskaxdeyda waa ay ku jirtay laakiin ma aqaan kicinta iyo Hingaadda”.
“Waxaan billaabay waxa aqrinta iyo qoridda,Todobo Sano ayey igu qaadatay arrintaas,markii aan arkay in aan wax aqrin karo oo aan qori karo waan ooyay,ooyay,waxaana u ekaaday qof hadda xoroobay oo kale”.
John Corcoran, ugu dambeyntii waxaa uu sameeyay Hay’ad magaciisa wadata oo Dadka waaweyn iyo Carruurta aan wax aqrin qorina karin arrintaas ka caawisa,caan ayuu ka yahay Mareykanka.